Riig qodista ceelka biyaha
Riig qodista jihada oo toosan
Riig qodista Rotary
Rig qodista rooga ee yaryar
Gaadhi yar oo gurguurta oo gurguuranaya oo dhan
Xoogga qandaraaska, kooxda mashiinka qodista qodaalka ee XCMG oo laga dhisay koonfurta!
Runtii mashruucu wuxuu u fiican yahay hab -nololeedka dadka. Tirada mashaariicda aasaaska raso waa 3,600, dhexroorka raso waa 600mm, 800mm, iyo 900mm. Celceliska qoto dheer ee raso waa 25m, mugga dhismuhuna waa weyn yahay. Si kastaba ha noqotee, qaab -dhismeedka karst -ka maxalliga ah ayaa u nugul shilalka sida burburka ...Akhri wax dheeraad ah »
XCMG waxay kor u qaadeysaa “fidinta” tamar -dhuleedka iyada oo la adeegsanayo dadaallada “dual carbon”!
Waqtiga dhejinta: Aug-02-2021
Tan iyo bilowgii sannadkan, “bartilmaameedka 3060 has ayaa si isdaba joog ah loo sheegay, iyo bartilmaameedka“ dual carbon ”bartilmaameedka ayaa loo dallacsiiyay istaraatijiyad qaran. Gobollada oo dhami waxay ku dadaalayaan inay noqdaan ilaaliyaha kacaanka tamarta waxayna dardar geliyaan hagaajinta qaab dhismeedka tamarta ...Akhri wax dheeraad ah »
XZ6600 HDD Isgoyska Grand Canal Beijing-Hangzhou
Waqtiga dhejinta: Jul-15-2021
XCMG daloolin jiheyn toosan XZ6600 oo ka tallaabaya mashruuca Kanaalka Beijing-Hangzhou waa inuu gacan ka geysto is-dhexgalka biyo-gelinta Magaalada Pizhou. Iyada oo laga gudbayo XCMG rig qoditaanka jihada jiifsan, aagagga woqooyi iyo koonfur ee kanaalka ayaa ku xiran si loo hubiyo badbaadada biyaha ...Akhri wax dheeraad ah »
XCMG Ceelka Biyaha Qodista Riig
Waqtiga dhejinta: Jun-10-2021
Qodista tamarta waxay caawisaa dhex -dhexaadinta kaarboonka Sanadihii la soo dhaafay, iyadoo laga jawaabayo siyaasadda horumarinta tamarta nadiifka ah ee qaranka iyo kor u qaadista horumarinta iyo ka -faa'iideysiga tamar -dhuleedka dalkeyga, XCMG Foundation ayaa billawday hor -u -marinta goobta qodista tamarta iyo wax -soo -saarka. XCMG ayaa ...Akhri wax dheeraad ah »
Mashruuca dhuumaha gaaska dabiiciga ah ee Bariga Shiinaha Ruushka wuxuu ka bilaabmaa xadka Sino Ruushka ee Magaalada Heihe, Gobolka Heilongjiang.
Waqtiga dhejinta: Jun-01-2021
Mashruuca Dhuumaha Gaaska Dabiiciga ah ee Sino-Russian East Route Gas Gas wuxuu ka bilaabmaa xadka Shiinaha iyo Ruushka ee Magaalada Heihe, Gobolka Heilongjiang wuxuuna ku dhammaanayaa Shanghai. Dhererkeedu waa 5,111 kilomitir. Waxay u qaybsan tahay saddex qaybood si loo ansixiyo oo dhismo loogu sameeyo wejiyo. Waxaa ka mid ah, qaybta waqooyi iyo t ...Akhri wax dheeraad ah »
XSL20/1000 waxay qoday 1680 mitir oo biyo guga kulul si ay u caawiso warshadaha Yifang
Waqtiga dhejinta: May-19-2021
Waxaan maqlay in qof ka socda Jaamacadda Taiwan uu na siiyay biyo guga kulul… ”Dhawaan, Riig -qodista ceelasha biyaha ee XCMG ayaa laga qoday biyaha guga hoose ee Xinquan Township, Jiangxi. Dhab ahaantii! Biyaha guga kulul waxaa la siiyaa darajada “aristocrat in water” sababtuna waa ...Akhri wax dheeraad ah »
Waxaan joognaa oo ilaalinnaa “maylkii ugu dambeeyay”!
Waqtiga dhejinta: May-10-2021
In Indonesia, dal loo yaqaan "dalka toban kun oo jasiiradood", XCMG qalabka qodista Rotary, qodista jihada jihada jiifka iyo alaabooyinka kale ayaa leh saamiga ugu sarreeya ee suuqa maxalliga ah, laakiin waxay ku kala firirsan yihiin ku dhawaad ​​10 jasiiradood. Goobaha dhismaha ee bannaanka waa m ...Akhri wax dheeraad ah »
Rugta qoditaanka jihada ee 1000-aad ee XCMG ayaa laga soo rogay khadka shirka sannadka 2019 iyo xafladda daahfurka ballaaran ee culeysyada jihada qodista jihada ee cufnaanta ballaaran
Waqtiga dhejinta: Apr-10-2021
Xafladda daahfurka 1,000th XCMG qoditaanka jihada qoditaanka jihada jiifta ee sannadka 2019 iyo daah-furka ballaaran ee qalabka qodista jihada jihada ee cufnaanta badan ayaa si weyn loogu qabtay XCMG Foundation! Xagga mashiinnada bilaa godadka ah, waxay kaga tagtay istaroog xooggan oo midab leh! Toban sano oo shaqo adag ...Akhri wax dheeraad ah »
XCMG, ayaa mar kale soo bandhigtay qiimeynta!
Dhawaan, “dhambaallada geesiyaasha” ee ka gudbaya goobada ayaa caan noqday Si kastaba ha ahaatee, dhererkeeda iyo dhibka dhismaha awgiis, ciyaartoy badan oo aad u fiican oo Trenchless warshadaha ah ayaa ka fogaada Isticmaal xoog sida “dhagaxa tallaabada” “Dhagaxa tallaabada” ee mashruucan mega waa. ..Akhri wax dheeraad ah »
XCMG XZ3600 riigga qoditaanka jihada jiifta ayaa mar kale noqotay “khabiir” isgoyska dhulka hoostiisa
Ka dib markii ay soo mareen 135MPa geology super-hard, XCMG XZ3600 qoditaanka jihada jihada jiifka ah, oo ku takhasusay “lafaha adag”, ayaa mar kale noqday “khabiir” ka gudba dhulka hoostiisa Dhawaan, qaabka qarxa ee weyn ee XZ3600 ee XCMG jihada jiifka d. ..Akhri wax dheeraad ah »
Dth Rig Machine, riig qodid, Mini Machine Drilling Machine, mashiinka qodista ceelka,